Warbixin: Senatooradii ugu horeeyay Aqalka sare oo lagu doortay Hirshabelle iyo Kharashka la bixiyey - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Warbixin: Senatooradii ugu horeeyay Aqalka sare oo lagu doortay Hirshabelle iyo Kharashka la bixiyey
Saddex sanatoor oo ah kuwii ugu horeeyay ee laga soo doorto maamulka Hirshabelle ayey xildhibaannada Baarlamaanka Hirshabeelle lagu doortay magaalada Jowhar.
Kursiga ugu horeeyay oo aha kii ugu adkaa ee sida weyn loogu tartamay waxaa kusoo baxay Senator Muuse Suudi Yalaxow oo wareegtii labaad ka guuleystay Axmed Xasan Caddow (Axmed Daaci), isagoo helay helay 55 cod, halka Axmed Daaci uu ka helay 43 cod. Doorashada ayaa waxaa codeeyey 98 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada HirShabeelle
Muuse Suudi iyo Axmed Daaci ayaa wareegga ugu dambeeyey isugu soo haray kadib markii uu tanaasulay Cabdullaahi Sheekh Xasan oo wareeggii koowaad ku helay 15 cod.
Kursiga uu kusoo baxay Muuse Suudi ayaa la sheegay in lacag fara badan lagu kala qaatay oo saddex musharax ay lacago badan oo ku dhow Hal Milyan oo Dollar ku bixiyeen xildhibaannada Baarlamaanka Hirshabeelle. Waxaana arrintan si cad u shaaciyey Musharax Axmed Daaci.
Sidoo kale Senator Nuur Maxamed Geedi Canjeex ayaa isna loo doortay Senator Aqalka Sare, markii uu helay 70 Cod,.
Dhinaca kale Senator Fartuun Cabdulqaadir Faarax Karaama ayaa Cod gacan taag ah ku kusoo baxday, Ka dib markii ay u tanaasushay Sacdiyo Yarow oo la tartameysay.
Senatoorada caawa lagu doortay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa kala ah:
1- Muuse Suudi Yalaxoow
2- Fartuun Cabdulqaadir Karaama
3- Nuur Maxamed Geeddi (Canjeex)
Doorashada Aqalka Sare ayaa waxaa hareeyay olole adag, siiba kursiga uu kusoo baxay Muuse Suudi oo dhinacyo kala duwan ay kala taageerayaan musharixiinta, sida Farmaajo, Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, waxaaa kusoo baxay musharixii taageersanaa madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh oo ah Muuse Suudi.
Previous articleRW Rooble oo jawaab culus u diray Farmaajo, kana digay marin habaabinta Kiiska Ikraan (Akhriso)
Next articleSenatoor cusub oo maanta lagu dooranayo Jowhar (Kursiga ugu adag iyo cidda kusoo bixi kara)